Chọpụta ụlọ ahịa egbu egbu kacha ochie n'ụwa, ị nwere ike ịkọ ogologo oge ọ nọ kemgbe? | Igbu egbugbu
Chọpụta ụlọ ahịa egbu egbu kacha ochie n'ụwa, ị nwere ike ịkọ ogologo oge ọ nọ kemgbe?
You nwetụla mgbe ị na-eche ihe ọ bụ ụlọ ahịa igbu egbugbu kasị ochie n'ụwa? Mmadu nwere ike iche banyere onodu mbu na Polynesia, ikekwe na narị afọ nke iri na itoolu, buuru site na nna ruo nwa nwoke, raara nye nkà mara mma nke Omenala omenaala...
Ma ọ dịghị otú ahụ. Azịza ya ga-eju gị anya. Nọgide na-agụ ịmatakwu!
1 Ihe ncheta mbụ na ndụ niile
2 Egbu egbugbu nke oge gara aga na taa
3 Obere ebe na Calle San Jorge
4 Ihe nkpuchi dị mwute
5 Ikpeazụ? obi ụtọ maka ezinụlọ maka ọrụ ha
Ihe ncheta mbụ na ndụ niile
Ọtụtụ, ọtụtụ afọ gara aga, karịa narị asaana Jeruselem enweghị postkaadị na ndị njem ala nsọ ndị na-aga ime njem ala nsọ ha ihe n'okporo ámá ndị na-ekpo ọkụ na uzuzu nke isi obodo ahụ ga-ewere ụdị ọzọ echetere m n'ụlọ.
Ihe kpatara ndị njem ala nsọ ji were ihe ndị a ihe ncheta na akpụkpọ gị ọ tọ dụdu iphe dụ ẹji. Na Ndị Kraịst ha na-ebu obe egbugbu na aha nke Kraist iji mata ha. Na ọbịbịa nke ndị ọbịa gaa Ala Nsọ, nke a bịara bụrụ ihe a na-ahụkarị ma ndị njem malitere ịka akara onwe ha icheta njem ha gafere ala ahụ na nke ha itinye uche n'okpukpe.
Egbu egbugbu nke oge gara aga na taa
Jerusalem, bụ obodo ebe ụlọ ahịa egbu egbu kacha ochie n'ụwa dị.
N'ihi Njem njem nlegharị anya nke Jerusalem, na-ahụkarị ọtụtụ narị afọ, ihe aghụghọ ndị kachasị ewu ewu ha agbanwebeghị nke ukwuu kemgbe ahụ. Na Jerusalem obe, oyiyi onye Kristian o latin kwuru bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị kachasị chọọ.
Ọ bụ ezie na ugbu a ngwaọrụ na-eji na-nd? igwe egbugbu, n'oge gara aga usoro ahụ bụ ihe ọzọ na-arụsi ọrụ ike. Na ederede oge a kọwara usoro a; nke m mara megharịrị imewe ahụ onye choro egbugbu site na ebu osisi na unyi ebe achoro. Ekem enye onye na-eme anwansi, site n'enyemaka nke a agịga nke na-etinyekarị na ink, depụtara ihe osise ahụ. N'ikpeazụ, ibe ahụ kwụsịrị na-a wineụ ya mmanya.
Obere ebe na Calle San Jorge
Ime ụlọ ahịa kacha ochie kacha mma n'ụwa (Fuente).
Ma nke a bụ ebe Razzouk ezinụlọ banye ihe. Ọgbọ anọ gara aga ezinụlọ ahụ biri Jeruselem, ọ bụ ezie na ọ na-egbu egbugbu ogologo oge: ya ndi nna nna ha mụtara nkà igbu egbugbu na Egypt ha na chọọchị metụtara mgbe nile.
La Familia kpebiri idozi na a obere obodo na warara ma dị jụụ uzo warawara, nso etiti, ma jụụ, nke ugbu a ji nganga na-eme egwuregwu a kalịnda na-egosipụta ha ihe karịrị narị afọ asaa nke akụkọ ntolite.
Ihe nkpuchi dị mwute
O di nwute na, na nke iri-abuo na narị afọ, n'oge agha Arab-Israel, ndị Razzouk ezinụlọ ama efehe aka Jordan na nka nke akara maka ndị njem ala furu efu ewu ewu. Mgbe ezinụlọ ahụ lọtara, ha jisiri ike lekọta ha ụlọ ahịa egbugbu sere n'elu ruo ọgbọ ole na ole, ma ọ dị ka ọ nweghị ụmụ nke onye nwe ya ga-elekọta Jehova azụmahịa ezinụlọ.
Ma otu n'ime ụmụ ndị ezinụlọ, Wassim, ọ gbanwere ihe niile. ya Mmasị maka ọgba tum tum duru ya inwe mmasi egbugbu na maka ọdịnala ochie nke ezinụlọ ya. Luckily o kpebiri weghara ụlọ ahịa ahụ.
Ikpeazụ? obi ụtọ maka ezinụlọ maka ọrụ ha
Kemgbe ahụ, ndị Nna Wassim Ọ lara ezumike nká na nwa ya nwoke na nwunye ya na-elekọta ụlọ ahịa ahụ, onye nwekwara mmasị na ya egbugbu. Ha abụọ mụtara usoro ohuru y ha mere ka ụlọ ahịa ahụ dị ọhụrụ, yana atụmatụ na ngwaọrụ, nke mere na ọdịnala anọ ndụ site na nke oge a.
Nke a Familia N'ihi ya, ọ bụghị na o doro anya na ụmụ ya chọrọ ịga n'ihu na azụmaahịa ahụ ma ha kwuru na ha agaghị arụgide ha. Ma ha anaghị atụ egwu maka ọdịnihu ha, n'ihi na ha kwenyesiri ike na ọdịnala na art Ha ga-akpọ ha, dịka ha kpọrọ Wassim ogologo oge gara aga.
Dị ka ị pụrụ ịhụ, akụkọ ihe mere eme nke ụlọ ahịa igbu egbugbu kasị ochie n'ụwa Ọ na-atọ ụtọ. Na gị onwe gị, mgbe ị gara Ink Razzouk? I tụrụ anya na m ga-enwe ọtụtụ akụkọ ihe mere eme? Ekekọrịta gị echiche na ihe!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Igbu egbugbu » Ogbugbu » Ndị na-ese egbugbu » Chọpụta ụlọ ahịa egbu egbu kacha ochie n'ụwa, ị nwere ike ịkọ ogologo oge ọ nọ kemgbe?
Mpempe akwụkwọ typewriter: nchịkọta nke atụmatụ
Gdị akara Dragonfly: nchịkọta na ihe ọ pụtara